Ụgbọ elu Condor amaliteghachila ụgbọ elu ya n'agwaetiti Paradaịs nke Seychelles
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ụgbọ elu Condor amaliteghachila ụgbọ elu ya n'agwaetiti Paradaịs nke Seychelles
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Ụgbọ elu Condor laghachiri na Seychelles
Ụgbọ elu Boeing 767/300 nke Condor Airline rutere n'ọdụ ụgbọ elu Seychelles na 0620 n'ụtụtụ Satọde, Ọktoba 2, 2021, ebe ekele ekele mmiri ga -alaghachi agwaetiti ya.
Ụgbọ elu mbụ nke Condor nke oge ya ruo agwaetiti Seychelles bu mmadụ 164 n'ime ya.
Ndị njem nke ọ bụla natara dịka akụkụ nke ihe na -ekpo ọkụ nabatara ihe ncheta sitere na Ngalaba Njem Nleta wee jiri egwu ọdịnala dị ụtọ mee ya obi ụtọ.
Ahịa German bụ otu n'ime ahịa ahịa iyi kacha mma maka Seychelles.
Ibido ụgbọ elu ya na-akwụsịghị akwụsị site na Frankfurt, ụgbọ elu mbụ nke Condor nke oge ruo Seychelles buru ndị njem 164 bụ ndị natara dịka akụkụ nke mmụọ ọma nabatara ihe ncheta sitere na Ngalaba njem nlegharị anya ma jiri egwu ọdịnala dị ụtọ mee ya obi ụtọ.
Ọ dị ugbu a maka mbata ụgbọ elu ahụ na ikele ndị njem 164 ahụ ka ha na -apụ, Onye isi ngalaba na -ahụ maka njem nlegharị anya maka ịre ahịa ebe, Oriakụ Bernadette Willemin, kwuru na ịmaliteghachi ọrụ ya, Condor sonyeere ụgbọ elu ndị ọzọ na -enye onyinye na mgbake nke ụlọ ọrụ njem na akụnụba nke agwaetiti.
“Site na ịmaliteghachi ọrụ ya, Condor sonyeere ụgbọ elu iri na abụọ ndị ọzọ. Ọ na -enye anyị ọ pleasureụ dị ukwuu ịhụ onye ọrụ ụgbọ elu ọzọ ka ọ laghachiri n'ikpere mmiri anyị. Ụgbọ elu si n'otu obodo dị na Europe na -abawanye uru mgbe niile maka ebe ị na -aga. Nke a bụ a nnukwu nzọụkwụ na mgbake anyị ọkachasị dịka ahịa German bụ otu n'ime ahịa ahịa iyi kacha mma maka Seychelles. Mweghachi nke ụgbọ elu na -abịa n'oge kwesịrị ekwesị yana gọọmentị German na -eme ka ihe ndị njem chọrọ maka ụmụ amaala German na ndị bi na -aga Seychelles, ”Oriakụ Willemin kwuru.
Maazị Ralf Teckentrup, onye isi ụlọ ọrụ nke Condor, na -egosipụta ntụkwasị obi ya na ebe ọ na -aga, kwuru, sị, “Seychelles na Oke Osimiri India bụ nke usoro ụgbọ elu Condor ma bụrụ ebe ndị ọbịa anyị na -agakarị. Agwaetiti a na -atọ ụtọ n'ụsọ osimiri pụrụ iche, coral reefs na oke ohia mmiri ozuzo, anyị na -atụkwa anya ifefe ndị ọbịa anyị ezumike mgbe ogologo oge nke ịkpafu. Anyị na Seychelles na -eme njem nlegharị anya na -arụkọ ọrụ nke ọma iji mee ka ndị ọbịa anyị nụ ụtọ ezumike nrọ ha. ”
Njem nlegharị anya Seychelles ga -eso ndị ọrụ ụgbọ elu, ndị mmekọ ụlọ ọrụ njem, mgbasa ozi yana ịkwalite mkpọsa ndị ahịa ya iji nweta ndị ọbịa si n'ahịa isi ya. “Mgbalị anyị ugbu a lekwasịrị anya n'ịlaghachi ndị ọbịa anyị si Germany na mba ndị agbata obi anyị. Site na mbata nke Condor, anyị na -atụ anya mmụba na ọnụọgụ mbata ndị ọbịa, ”Oriakụ Willemin kwuru.
Germany bụ isi ahịa ahịa maka Seychelles na 2019, mgbe njem ahụ dekọrọ ndị ọbịa 72,509 si Germany bịa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ n'ime ha mere njem na Condor. Ndị ọbịa 8,080 gara Seychelles n'ime ọnwa itoolu mbụ nke 2021.